ချုပ်ချယ်တဲ့ မိဘတွေဆီက ဘယ်လို ရုန်းထွက်မလဲ? - For her Myanmar
ချုပ်ချယ်တဲ့ မိဘတွေဆီက ဘယ်လို ရုန်းထွက်မလဲ?
Family, Relationship, Tips
အိမ်မပိုင်လို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ ယောင်းတို့ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ဖို့
ယောင်းတို့ရေ… တချို့မိဘတွေ ရှိတယ်… သားသမီးကို ဟိုမသွားရဘူး ဒီလူနဲ့ မပေါင်းနဲ့ ဒါမျိုးမဝတ်ရဘူးစသဖြင့် ချုပ်ချယ်တတ်ကြတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကိုယ်ကမနူးမနပ်အရွယ်မို့လို့ မဖြစ်သင့်တာမဖြစ်ရအောင် ချုပ်ချယ်တယ်ဆိုတာမျိုးက ဒီနိုင်ငံအနေအထားနဲ့ဆို ဖြစ်သင့်တဲ့ အနေအထားတစ်ခုပေမဲ့ (တကယ်တမ်းတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ရပ်တည်နိုင်အောင် ငယ်လေးကတည်းက သင်ရမှာနော်.. ချုပ်ချယ်တာက နည်းလမ်းမဟုတ်ဘူးရယ်.. ဒါတော့ နောက်မှ ဆက်ပြောတာပေါ့နော် 😀 ) အရွယ်ရောက်လို့ ကြီးကောင်ကြီးမားဖြစ်တဲ့အထိ လိုက်ချုပ်ချယ်နေတာကတော့ တော်တော်လေးကို လွဲနေပါပြီ။
မိဘကတော့ ချစ်လို့ ချုပ်ချယ်တာ မှန်ပေမဲ့ ခံရတဲ့ သားသမီးခမျာ မသက်သာဘူးလေ။ သူတို့က ချုပ်ချယ်၊ ကိုယ်ကပြန်ပြောမိ၊ အပြန်အလှန်စကားများကြရင်းနဲ့ နောက်ဆုံး နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပါပဲ။ ဆိုတော့ကား…ဒါတွေကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဆို နည်းလမ်းကောင်းတွေ လိုလာပါပြီ။
Related Article >>> သားသမီးကို ချုပ်ချယ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်များ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း မိဘကို နားလည်အောင် ရှင်းပြပါ။ ရှင်းပြပါဆိုတဲ့နေရာမှာ လေသံမာမာနဲ့ အတင်းအကြပ်ပြောတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အေးအေးဆေးဆေး ပြောတာ ဖြစ်ပါစေနော်။ ဒီနေရာမှာတင် အဆင်ပြေသွားရင် ကိစ္စမရှိပေမဲ့ ယောင်းလေသံအေးအေးနဲ့ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် ရှင်းပြတာကို ဖေဖေမေမေက လက်သင့်မခံဘူး ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရင် ယောင်းအနေနဲ့ တစ်ဆင့်တက်ရပါတော့မယ်။
များသောအားဖြင့် ယောင်းတွေက အရင်သွားလိုက်မယ် ဖေဖေမေမေဆူလည်း နောက်မှ မီးစင်ကြည့်ကမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးရှိကြတယ် (သိနေတယ်…သိနေတယ်) အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ယောင်းနဲ့ချုပ်ချယ်တဲ့ဖေဖေမေမေဇာတ်လမ်းက မုန့်လုံးစက္ကူကပ်နေတော့မှာပါ။ အရင်ဆုံး ယောင်းဖေဖေနဲ့မေမေဆီမှာ ယောင်းကို အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးဖို့တောင်းဆိုပါ။ အခွင့်အရေးပေးမိတဲ့အတွက်လည်း နောင်တမရစေရပါဘူးဆိုတဲ့ ကတိပေးပါ။ ဥပမာ ယောင်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခရီးတူတူထွက်ချင်တာမျိုး ဆိုပါစို့။ ယောင်းဖေဖေနဲ့ မေမေကို ဒီတစ်ခါတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပေးသွားပါလို့ တောင်းဆိုပါ။ ဘယ်သူတွေ ပါမယ်၊ ဘယ်ကိုသွားမယ် ဆိုတာတွေကို အသေးစိတ်ပြောပြပါ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားတဲ့အခါ ဘာမှမဖြစ်စေရပါဘူး၊ ဘာမှ မဟုတ်တာ မလုပ်ပါဘူး ဆိုတဲ့ ကတိကို ပေးပါ။
Related Article >>> သမီးမိန်းကလေးမို့ ပိုချုပ်ချယ်တယ်ဆိုတာ မှန်ကန်ပါရဲ့လား
ပထမဆုံးအကြိမ်မှာသာ ယောင်းက သူတို့မကြိုက်တာ တစ်ခုခုလုပ်လိုက်တယ်၊ ကတိဖျက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ သိကြားမင်းတောင် မကူမကယ်နိုင်ပါဘူးနော်။ ယောင်းဘက်ကသာ ကတိတည်တယ်ဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ခါ ထပ်တောင်းဆိုဖို့ လွယ်သွားပါပြီ။ လေးငါးခါလောက်ထိ ယုံကြည်စိတ်ချလို့ရတာ သေချာသွားပြီဆိုရင်တော့ ယောင်းက တစ်နေရာရာ သွားမယ်ဆိုတိုင်း ဖေဖေမေမေကလည်း ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ လွှတ်မှာပါနော်။
အိမ်ပိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့က ယောင်းနဲ့ယောင်းမိဘကြားမှာ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်မှ ရမှာပါ။ ယောင်းကိုယ်တိုင်က အိမ်က စိတ်မချရအောင် နေမယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်ပိုင်ဖို့အရေး ဝေလာဝေးပါပဲ။ ယုံကြည်မှုဆိုတာလည်း လွယ်လွယ်ဖြစ်လာတတ်တဲ့ အရာ မဟုတ်တာကြောင့် စိတ်ကလေးတော့ ရှည်ကြပါလို့ မှာပါရစေ ယောင်းတို့ရေ..
အိမျမပိုငျလို့ စိတျညဈနတေဲ့ ယောငျးတို့ ဖတျဖွဈအောငျ ဖတျဖို့
ယောငျးတို့ရေ… တခြို့မိဘတှေ ရှိတယျ… သားသမီးကို ဟိုမသှားရဘူး ဒီလူနဲ့ မပေါငျးနဲ့ ဒါမြိုးမဝတျရဘူးစသဖွငျ့ ခြုပျခယျြတတျကွတယျ။ ငယျငယျတုနျးကတော့ ကိုယျကမနူးမနပျအရှယျမို့လို့ မဖွဈသငျ့တာမဖွဈရအောငျ ခြုပျခယျြတယျဆိုတာမြိုးက ဒီနိုငျငံအနအေထားနဲ့ဆို ဖွဈသငျ့တဲ့ အနအေထားတဈခုပမေဲ့ (တကယျတမျးတော့ ကိုယျ့ဘာသာ ရပျတညျနိုငျအောငျ ငယျလေးကတညျးက သငျရမှာနျော.. ခြုပျခယျြတာက နညျးလမျးမဟုတျဘူးရယျ.. ဒါတော့ နောကျမှ ဆကျပွောတာပေါ့နျော 😀 ) အရှယျရောကျလို့ ကွီးကောငျကွီးမားဖွဈတဲ့အထိ လိုကျခြုပျခယျြနတောကတော့ တျောတျောလေးကို လှဲနပေါပွီ။
မိဘကတော့ ခဈြလို့ ခြုပျခယျြတာ မှနျပမေဲ့ ခံရတဲ့ သားသမီးခမြာ မသကျသာဘူးလေ။ သူတို့က ခြုပျခယျြ၊ ကိုယျကပွနျပွောမိ၊ အပွနျအလှနျစကားမြားကွရငျးနဲ့ နောကျဆုံး နှဈဦးနှဈဖကျလုံး စိတျမကောငျးဖွဈရတာပါပဲ။ ဆိုတော့ကား…ဒါတှကေို ဖွရှေငျးဖို့အတှကျဆို နညျးလမျးကောငျးတှေ လိုလာပါပွီ။
Related Article >>> သားသမီးကို ခြုပျခယျြခွငျးကွောငျ့ ဖွဈလာနိုငျတဲ့ အကြိုးဆကျမြား
ကိုယျ့ကိုယျကို ထိနျးသိမျးနိုငျတဲ့ အရှယျရောကျနပွေီဖွဈကွောငျး မိဘကို နားလညျအောငျ ရှငျးပွပါ။ ရှငျးပွပါဆိုတဲ့နရောမှာ လသေံမာမာနဲ့ အတငျးအကွပျပွောတာမြိုး မဟုတျဘဲ အေးအေးဆေးဆေး ပွောတာ ဖွဈပါစနေျော။ ဒီနရောမှာတငျ အဆငျပွသှေားရငျ ကိစ်စမရှိပမေဲ့ ယောငျးလသေံအေးအေးနဲ့ အကြိုးသငျ့ အကွောငျးသငျ့ ရှငျးပွတာကို ဖဖေမေမေကေ လကျသငျ့မခံဘူး ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရငျ ယောငျးအနနေဲ့ တဈဆငျ့တကျရပါတော့မယျ။
ယောငျးဖဖေနေဲ့မမေဆေီမှာ ယောငျးကို အခှငျ့အရေးတဈခုပေးဖို့တောငျးဆိုပါ။ အခှငျ့အရေးပေးမိတဲ့အတှကျလညျး နောငျတမရစရေပါဘူးဆိုတဲ့ ကတိပေးပါ။ ဥပမာ ယောငျးက သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ခရီးတူတူထှကျခငျြတာမြိုး ဆိုပါစို့။ ယောငျးဖဖေနေဲ့ မမေကေို ဒီတဈခါတော့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ပေးသှားပါလို့ တောငျးဆိုပါ။ ဘယျသူတှေ ပါမယျ၊ ဘယျကိုသှားမယျ ဆိုတာတှကေို အသေးစိတျပွောပွပါ။ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ သှားတဲ့အခါ ဘာမှမဖွဈစရေပါဘူး၊ ဘာမှ မဟုတျတာ မလုပျပါဘူး ဆိုတဲ့ ကတိကို ပေးပါ။
Related Article >>> သမီးမိနျးကလေးမို့ ပိုခြုပျခယျြတယျဆိုတာ မှနျကနျပါရဲ့လား
ပထမဆုံးအကွိမျမှာသာ ယောငျးက သူတို့မကွိုကျတာ တဈခုခုလုပျလိုကျတယျ၊ ကတိဖကျြလိုကျတယျဆိုရငျတော့ သိကွားမငျးတောငျ မကူမကယျနိုငျပါဘူးနျော။ ယောငျးဘကျကသာ ကတိတညျတယျဆိုရငျတော့ နောကျတဈခါ ထပျတောငျးဆိုဖို့ လှယျသှားပါပွီ။ လေးငါးခါလောကျထိ ယုံကွညျစိတျခလြို့ရတာ သခြောသှားပွီဆိုရငျတော့ ယောငျးက တဈနရောရာ သှားမယျဆိုတိုငျး ဖဖေမေမေကေလညျး ကွညျကွညျဖွူဖွူ လှတျမှာပါနျော။
အိမျပိုငျတဲ့သူတဈယောကျဖွဈဖို့က ယောငျးနဲ့ယောငျးမိဘကွားမှာ ယုံကွညျမှု တညျဆောကျမှ ရမှာပါ။ ယောငျးကိုယျတိုငျက အိမျက စိတျမခရြအောငျ နမေယျဆိုရငျတော့ အိမျပိုငျဖို့အရေး ဝလောဝေးပါပဲ။ ယုံကွညျမှုဆိုတာလညျး လှယျလှယျဖွဈလာတတျတဲ့ အရာ မဟုတျတာကွောငျ့ စိတျကလေးတော့ ရှညျကွပါလို့ မှာပါရစေ ယောငျးတို့ရေ…
Tags: Family, happy family, Letters from Heart, Parents, Relationship, strict parents
Collagen က ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုအကျိုးပြုနေလဲ?
လူတွေ သတိထားမိနေတဲ့ ယောင်းရဲ့ အဓိကဆွဲဆောင်မှုက ဘာများလဲ ?
Stella March 4, 2019